२ सय ५५ जना यात्रु सवार जहाजले आकाशमा १० पटकभन्दा बढी फन्को लगाउँदा… – जलजला अनलाइन
२ सय ५५ जना यात्रु सवार जहाजले आकाशमा १० पटकभन्दा बढी फन्को लगाउँदा…
Posted on April 2, 2019 April 2, 2019 Author Comments Off on २ सय ५५ जना यात्रु सवार जहाजले आकाशमा १० पटकभन्दा बढी फन्को लगाउँदा…
चैत १९ काठमाडौं । गत आइतबार दिउँसो ३: ५५ मा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उडेको थियो।
यो खबर नेपाललाइभमा छ, अन्नपूर्ण नाम दिएइको कलसाइन नाइन एन एएलवाई ए३३०–२०० जहाजमा २ सय ५५ जना यात्रु सवार दिए । उक्त जहाज नेपाल एयरलाइन्सका अनुभवी तथा वरिष्ठ पाइलट श्रवण रिजालको कमान्डमा थियो। जहाजमा को–पाइलटको भूमिकामा थिए रमन घिमिरे।
जहाज जब नेपालको सिमराको आकाशमा थियो, एक्कासि मौसम खराब भएको सूचना आफूले पाएको पाइलट रिजालले बताए।
के भएको थियो? पाइलट श्रवण रिजालकै शब्दमा:
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टावरबाट मौसम खराब भएको सूचना भइसकेको थियो। टावरको सूचनासँगै सिमरा क्षेत्रको मौसम केही हामीले पनि थाहा पाइसकेका थियौं। मौसम खराब भएका कारण जहाज काठमाडौं विमानस्थलका ल्यान्ड गर्न जान सक्ने अवस्था थिएन।
मौसम खराब भएको सूचना पाउनासाथ जहाजलाई सिमरा पूर्वतिरको आकाशमै होल्ड गर्न थालेँ। बिस्तारै रात पर्दै थियो। जहाजले १० फन्कोभन्दा बढी लगाइसकेको थियो। जहाजमा सवार यात्रुमा त्रास पनि सुरु भएको थियो।
सिमरापूर्वको क्षेत्रमा मौसम खराब थिएन। जहाज पनि बादलमा छिरेको थिएन। तर, रातको समयमा जहाजको लाइटका कारण यात्रुले बादलको छायाँ नजिकै भएको अनुभूत गरेका थिए। कतिपय यात्रुले बान्ता गरेको सूचना ककपिटमा भइसकेको थियो।
आकाशका ३ घन्टासम्म होल्ड गर्न पुग्ने इन्धन पनि थियो। हामीलाई तत्काल नै जहाज डाइभर्ट गरेर अन्य विमानस्थलका जानुपर्ने अवस्था थिएन। हामीले जहाज आकाशमै होल्ड गरिरहेका थियौं। जहाज १ घन्टा १० मिनेटभन्दा बढी होल्ड भइसकेको थियो। यही समयमा टावरका अन्य जहाज डाइभर्ट भएको सूचना हामीले पाइरहेका थियौं। तर, हामीसँग आवश्यक इन्धन भएका कारण मौसम खुले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ल्यान्ड गर्ने तयारीमा थियो।
विमानस्थल कार्यालयले मौसम खुलेको सूचना दिएपछि पनि हामीले जहाज सिमरापूर्वकै आकाशमा फन्को मारिरह्यौं। मौसम सुधार हुँदै गएपछि हामी जहाज ल्यान्डका लागि काठमाौंतर्फ लागेका थियौं। काठमाडौंतर्फ लाग्दैगर्दाै जहाज तीन मिनेट हल्लिएको थियो। जहाज नर्मल (लाइट एप्रोच) मा भने थिएन। मोडरेट एप्रोचमा थियो। यो समान्यभन्दा केही असहज अवस्था भने हो। तर, गुराँसेबाट काठमाडौं छिर्दै गर्दा उपत्यकाको मौसम पनि अति नै राम्रो थियो।
हामीले सवधानीका साथ विमानस्थलमै ल्यान्ड गर्न सफल भयौं। जहाज दिल्लीबाट उडेको करिब ३ घन्टापछि मात्रै ल्यान्ड भएको थियो। दिल्ली–काठमाडौंको उडान एक घन्टा १५ मिनेटको हो।
माघ ९ दाङ । दाङबाट काठमाडौंकोलागि छुटेको यात्रुबहाक डिलक्स बस कपिलबस्तुको शिबराज नगरपालिका वडा नं. १ मा शिवपुरमा दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटना हुँदा चारजना यात्रु घाईते भएका छन् । पिपलको रुखमा ठोक्किदा दाङको साहारा यातायात प्रालिको ना ६ ख ३९७२ नम्वरको बस दुर्घटनामा परेको प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । बुधवार […]
सल्यान: ४ कराेड बजेटको बागचाैर–पातिहाल्न सडक अलपत्र, नेताहरु मौन
साउन २७, सल्यान । करोडौं बजेट परेको सल्यान बागचौर–कोटमौला–पातिहाल्न सडकखण्ड अहिले हिलाम्य अवस्थामा छ । एक दशक पहिले नै खोलिएको बागचौर–कोटमौला–पातिहाल्न सडकखण्ड सधै बर्षायाममा हिलाम्य हुने र गाडीहरु नचल्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । जहाँ कोटमौला पातिहाल्न लगाएत रोल्पासम्मका यात्रुहरु राप्ती राजमार्गको कालाखेत तथा बागचौरबाट हिडेर जाने गर्दछन् । रोल्पाको सुकिदह गाउँपालिका समेत पुग्ने उक्त सडक […]
यातायात सिन्डिकेट औपचारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणापछि पनि समिति
बैशाख २८, काठमाडौँ । यातायात सिन्डिकेट औपचारिक रूपमै अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनको टिकट काट्ने जिम्मा भने यातायात समितिलाई नै दिएको छ । संक्रमणकालका लागि भन्दै सरकारले समितिहरूलाई विगतमा जस्तै टिकट काट्ने छुट दिएको हो । गोंगबु बसपार्कबाट छुट्ने गाडीका हकमा भने समितिहरूले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिको ब्यानरमा टिकट काट्नुपर्नेछ । बसपार्कभित्रबाट गाडी छुट्ने सबै समितिको टिकट […]